Soo-dejinta Polikarpov U-2 (Po-2) taxanaha dambe ee V1.0 FSX & P3D - Rikoooo
Polikarpov U-2 (Po-2) taxanaha taxanaha v1.0 FSX & P3D
downloads 8 976
Legend of duulista Soviet, U-2, waxaa la abuuray tababare ahaan, in bedel ah huriye U-1 (nuqul AVRO-504K). Diyaaradan ayaa waxaa loogu talagalay iyo dhisay by ina 35-sano jir ah oo wadaadku bixiyoba, Nikolai Polikarpov ee June 1927. duwanaansho ugu horeeya whith a wingtips qaab iyo airfoil qaro weyn, wuxuu ahaa lagu guulaysan.
version labaad (la wingtips fekrado iyo airfoil cusub) waxaa flewn January 7, 1928 by tijaabo baaritaan M.Gromov, oo helay rating a ugu sareeya.
wax soo saarka Mass of the-U 2 bilaabay bishii March 1928 by plant¹23 in Leningrad. dagaalka ka dib, wax soo saarka serial ee fudud oo aan qaali ahayn soosaarka Po-2 sii waday ilaa 1953, iyo in Seminaarada Repair - ilaa 1959.
Nolosha duulimaadka firfircoon ee U-2, kaas oo loo baxshay in 1944, dhimashada N.Polikarpov ah in Po-2 ka dib, qaadatay in ka badan 40 sano. design ayaa waxaa si joogto ah habeeyay xafiiska Polikarpov iyo by dayactirka iyo beerta siminaaro. In ka badan 32,000 diyaarado la dhisay (in dhirta Ruush) - tani waa diyaarad mass labaad ee dunida. Diyaarad ayaa lagu naaneeso sida "Mule" by NATO iyo "Kukuruznik" ( "duster hadhuudh", version beeraha) ee Russia.
Warbixin ku saabsan oo dhan versions iyo beddelka ah ee U 2 (Po-2) ma mid evergeneralized ee guud ahaanteed kala duwan. Ma jiro qof iyaga oo dhan weli ku qor.
Gaar ahaan cajiib ah in ay baaxadda iyo waxtarka ahaa isticmaalka ku-U 2 sida qarxiyay habeenkii inta lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida ah. In ka badan kala bar load qaraxa, gebi ahaan hoos u dhacay oo dhan diyaarado Soviet in 1941-1945 dhiibay "diyaarado oo qoryo iyo maro".
Sidoo kale waa inaynu sheegeynaa caanka ah "påskkäringar Night" - shaqaalaha dhaddig oo 46th Taman ilaalada Ciidankii ah, kuwaas oo si xoog leh u diriray ay U-2.
Codsiga ugu weyn ee diyaarad Sida xaqiiqada ah waxay ahayd tababarka bilowga ah pilot. Ka hor inta 1941 ku saabsan duuliye 50,000 waxaa loo tababaray ee U-2.
Faa'iidooyinka ugu wayn ee ka mid ah-U 2 tababare ahaan ay aheyd qaab ciyaareed aad u fiican horyaalka - istareexsan gaarka ah ee ay hoggaamiso, xawaaraha degtey hoose iyo xaqiiqda ah in diyaaradda ay adag tahay in lagu rido tailspin ah.
Faa'iidada kale oo muuqda ahaa xawaaraha yar toosan ee dhexsocoto - saabsan 2 m / s at rpm oo aan waxtar lahayn. In ka yar baarashuud ee wakhtigaas.
No dareen in la buuxiyo taangiga shidaalka ka badan 40% for aerobatics.
No heleynin ama matoorka in version this, si gacanta bilaaban:
- Ceejinta set in taagtaagan iyo isku dar si buuxda hodan
- Xadka shidaalka ku biiro "furo"
- Guji Primer kabaalka jeer 3-4
- Magnetos biiro "1 + 2"
- Sayidkiisii ​​ku biiro on batari
- Biiro "engine bilowday" view
- Guji daab xoojinaya
Ama jaraa'id ctrl + e
IRIS P-40 Warhawk - Tijaabooyinka FSX & P3D